हाडजोर्नी बारे विशेषज्ञ सेवा गाउँमै पाएपछि स्थानीय खुशी – Saurahaonline.com
हाडजोर्नी बारे विशेषज्ञ सेवा गाउँमै पाएपछि स्थानीय खुशी
चितवन (ठोरी) २३ पुस । ठोरी गाउँपालिका २ की ६७ वर्षीया यमुना श्रेष्ठ घुँडा दुख्ने समस्याबाट पीडित बनेको धेरै वर्ष भयो । वृद्ध अवस्थामा उनलाई यो समस्याले झनै च्यापेको छ । तर, भरतपुर र वीरगंजको यात्रा दुरी टाढा हुँदा उनलाई स्वास्थ्य सेवा लिन गाह्रो भएको छ ।
तर, श्रेष्ठजस्ता थुप्रै व्यक्तिमा देखिएको घुँडा दुख्ने समस्या र हाड सँग सम्बन्धि अन्य समस्याहरुको समाधान गाउँमै भयो ।
यातायातको असुविधा, लामो दुरी र गरिविका कारण हाडजोर्नी सँग सम्बन्धित रोग भएकाहरुले गाउँको विशेषज्ञ सेवा पाएका छन् । गाउँमै हाडजोर्नी सम्बन्धि विशेषज्ञ सेवा पुगेपछि ठोरी गाउँपालिका वाड नम्बर २ का स्थानीय खुशी भएका छन् ।
अलाइभ हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टरको प्राविधिक सहयोग र स्थानीय यूवा जागृति क्लवको आयोजनामा एक दिने निशुल्क हाडजोर्नी सम्बन्धि शिविर शनिबार सम्पन्न भएको हो ।
शिविरमा १ सय ६० जनाले सेवा लिए । ‘धेरै जसो वृद्धवृद्धामा हाडजोर्नीको समस्या देखियो, अलाइभ हस्पिटलका विशेषज्ञ डाक्टर प्रमोद लामिछानेले भने,‘पैसा अभाव र यातायात अभावले गर्दा सहज स्वास्थ्य नपाएकाहरुले सेवा पाएका छन् ।’ हाडजोर्नी सम्बन्धी स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका कतिपयको सेवाका लागि अलाइभ हस्पिटलबाट पनि सेवा दिन सकिने डा. लामिछानेले बताए ।
संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना अनुसार पर्सा जिल्लाको पछाडी परेको क्षेत्रमा गइ निशुल्क सेवा दिइएको अस्पतालका प्रबन्धक डा. वीएम खरेलले बताइन् । यस अघिका वर्षहरुमा पनि अन्य विकट ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा दिएको जानकारी गराउँदै व्यवस्थापक डा. खरेलले ठोरी क्षेत्रमा पनि आवश्यकता र मागका आधारमा सेवा पु¥याइएको बताइन् ।
‘यातायात असुविधा र विपन्नताका कारण वर्षौदेखि थलिएका विरामीले गाउँमै सेवा पाउँदा हामी निकै खुशी छौं, ठोरी गाउँपालिका का अध्यक्ष पीएल श्रेष्ठले भने,‘सामान्य शिविर भन्दा हाडजोर्नी सम्बन्धि शिविर महत्वपूर्ण रहेको बताए ।’
‘आँखा, पेट, नाक, कान, घाँटी जस्ता समस्याको बारेमा पटकपटक शिविर भएको थियो, आयोजक स्थानीय क्लव यूवा जागृति क्लवका अध्यक्ष जिवन कृष्ण सापकोटाले भने,‘उपचार सेवा समेत महंगो रहेको यो विशेष सेवा गाउँमै पाउँदा सवै खुशी छन् ।’
विश्वास फार्मेसी वसन्तपुर माडीका संचालक गोविन्द नेपालले भने,‘ठोरी क्षेत्रमा भएको हाडजोर्नी सम्बन्धि विशेषज्ञ सेवाले ठूलो राहत मिलेको छ ।’
भाउजुको ह’त्या गरेको आरोपमा एक पक्राउ २०७८, ५ बैशाख आईतवार
भाउजुको ह’त्या गरेको आरोपमा एक पक्राउ
काठमाडौं : काठमाडौंमा भाउजुको ह’त्या गरेको आरोपमा एक जना देवर पक्राउ परेका छन् ।महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ.....